केमोथेरापीले निम्त्याउने प्रतिकूल असर र तिनको सामना – Health Post Nepal
केमोथेरापीले निम्त्याउने प्रतिकूल असर र तिनको सामना
२०७६ साउन २७ गते १९:१५
केमोथेरापी के हो ?
केमोथेरापी भनेको विशेष प्रकारको औषधिद्वारा क्यान्सरको उपचार गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा प्रयोग हुने औषधिहरूलाई केमोथेरापीका औषधि भन्ने गरिन्छ । केमोथेरापी क्यान्सरको प्रकृति हेरेर निर्धारण गरिन्छ । केही क्यान्सरमा रोगको निदान भएपछि केमोथेरापी सुरु गरिन्छ भने अरू क्यान्सरमा अपरेसनपछि अथवा रेडियसनसँगै र पछि दिइन्छ । केमोथेरापीको प्रकार बिरामीलाई चाहिने मात्रामा भरपर्छ । बिहान आएर केमोथेरापी लिएर बेलुका घर फर्किने केमोथेरापीलाई ‘डे केयर केमोथेरापी’ भन्छन् । भर्ना भएर लिने केमोथेरापीलाई ‘इनपेसेन्ट केमोथेरापी’ भनिन्छ ।
केमोथेरापी कसरी दिइन्छ ?
केमोथेरापी कि त खाने गोली औषधिमार्फत दिइन्छ, कि रगतका नसाबाट दिइन्छ । इन्जेक्सनबाट दिनुपर्ने खण्डमा वार्डमा नर्सले केमोथेरापी मिसाइएको सलाइन लगाइदिन्छन्, जसबाट औषधि जान्छ । औषधि कतिवटा र कहिलेसम्म लिनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो डाक्टरलाई सोध्नुपर्छ । कुनै केमोथेरापी केही मिनेटमा सकिन्छ भने कुनै ३–४ दिनसम्म चलाउनुपर्छ । सबै केमोथेरापीका औषधि महँगा हुँदैनन्, केही महँगा औषधि पक्कै छन् । तर, कुन केमोथेरापीले सबैभन्दा फाइदा गर्छ, त्यसबारे सल्लाह गरेर मात्र उपचार सुरु गरिन्छ ।
केमोथेरापीका कारण विभिन्न प्रतिकूल असर देखिन सक्छन्, तर यी असर सबैलाई हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । यसमा बिरामीको उमेर, तौल, पोषणले फरक पार्छन् । आफूलाई हुन सक्ने असरबारे डाक्टरसँग सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केमोथेरापीका प्रतिकूल असर के–के हुन् र कसरी सामना गर्ने ?
कमजोरी : केमोथेरापीपछि शरीरमा ताकत नभएजस्तो, कमजोरी हुने धेरैजनालाई हुन्छ । अलिअलि कसरत गर्नुहोस्, पोसिलो खाना खानुहोस् । आफूजस्तै अरू बिरामीसँग कुरा गर्नुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस्, केमोथेरापी सकिएपछि धेरै समस्या हराएर जान्छन् ।
वाकवाकी लाग्नु, उल्टी हुनु : केमोथेरापीको प्रकृतिअनुसार कसैकसैलाई वाकवाकी लाग्ने, उल्टी हुने हुन सक्छ । यसलाई रोक्ने औषधि केमोथेरापी दिनुअघि नै दिइन्छ र केमोथेरापी लिएपछि केही दिनसम्म लिनुपर्छ ।
पखाला लाग्नु : कुनै–कुनै केमोथेरापीले पखाला लाग्न सक्छ । जीवनजल र झोल पदार्थ प्रशस्त पिउनुहोस्, धेरै भयो भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ।
खाना खान मन नलाग्नु : केमोथेरापी लिइसकेपछि खानेकुरा खान रुचि हराउन सक्छ । त्यसो भयो भने थोरै थोरै गरेर पटक पटक खानुहोस , हल्का फुल्का खाने गर्नुहोुस , चिन्ता नगर्नुहोस, केमोथेरापी सकिए पछि खानाको रुची बढेर आउँछ ।
दुख्नु : सुई लगाएको ठाउँमा दुख्नु, पूरै शरीरमा दुखेजस्तो हुनु, झमझम हुनु केमोथेरापीका प्रतिकूल असर हुन् । यस्तो भयो भने आफ्नो डाक्टरसँग भन्नुहोस् ।
ज्वरो आउनु : केमोथेरापीका कारण शरीरको संक्रमणसँग लड्ने क्षमतामा कमी आउन सक्छ र यस्तो भयो भने ज्वरो आउँछ । केमोथेरापी लगाएपछि ज्वरो आयो भने तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ ।
रगतको कमी हुनु : केमोथेरापी लगाउनुअघि र लगाइसकेपछि रगत जँचाउनुपर्छ । केमोथेरापीले रगतको कमी गराउन सक्छ । रगतको कमी भएको खण्डमा रगत चढाउन पर्न सक्छ ।
छालामा समस्या : केमोथेरापी लगाउन सुई लगाएको ठाँउमा दागहरू देखिन सक्छन्, केमोथेरापी लगाएको रगतका नसा सुक्न सक्छन् । छाला सुक्खा हुन सक्छ, त्यसका लागि सामान्य क्रिम लगाउनुहोस् ।
यौन र प्रजनन केमोथेरापीका कारण कसैकसैलाई यौन चाहना घटेर जान्छ, महिलाको योनि सुक्खा भएर समस्या आउन सक्छ । अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ भने क्यान्सर सर्ने रोग होइन र यी सबै लक्षण अस्थायी हुन् । केही केमोथेरापीका औषधिले महिला र पुरुषको प्रजनन शक्ति घटेर जान्छ, जुन स्थायी वा अस्थायी हुन सक्छन् । केमोथेरापी लिइरहेका बिरामीले पनि यौनसम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ ।
कपाल झर्नु : केमोथेरापी लिइरहेकामध्ये कसैकसैको कपाल झर्न सक्छ । कसैको कपाल पातलो भएर जान्छ भने कसैको सबै कपाल झर्छ । केमोथेरापी सकिएपछि धेरैजसोको कपाल फेरि पलाउँछ । त्यसैले टोपी लगाउनुहोस्, सामान्य स्याम्पु प्रयोग गर्नुहोस्, अनि नरम ब्रसले कपाल कोर्नुहोस् । आजकल बजारमा नक्कली कपाल (विग) लगाउन सक्नुहुन्छ ।
(काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर)
काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर